Faneva Ima na Faneva Andriatsima. Maniry haka ity lohalaharan’ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra ity ny ekipa divizionina voalohany ao La Reunion, As Excelsior. Efa nanambara anefa izy fa malaina ny hiala ao Frantsa na dia mbola mieritreritra ny hilalao 2 taona eo aza. Ankoatra ny taona izay efa mananika ny faha 35 dia heverin’ireo teknisianina fa sakana ho azy koa anefa izy mifidy rafi-dalao na “système de jeu” mirona kokoa amin’ny rafitra 4-2-3-1 na 4-5-1 noho izy "Attaquant pivot". Endrika tsara ho azy kosa ny fahombiazan'ny Barea izay tonga hatrany amin'ny ampahahefa-dalan'ny CAN 2019 natao tatsy Ejipta farany teo. Tokony hanana klioba anefa izy mialoha ny volana novambra, izay hiatombohan’ny fifanintsanana ho amin’ny CAN 2021.